Ngwakọta Semalt akọwapụtara ụzọ iji chebe gị WordPress Website Site na ndị na-agba ọsọ
Ịntanetị na-enye nnukwu mmadụ ohere. Ọtụtụ ụlọ ọrụ na-enweta onlinen'elu ikpo okwu iji dọta ọtụtụ ndị ahịa si n'ebe dị iche iche na weebụ. Ụfọdụ n'ime ebe ndị a gụnyere engine search site na iji Ngini NchọnchọNjikarịcha (SEO) ma ọ bụ na netwọk mmekọrịta na-eji Social Media Marketing (SMM).
WordPress akaụntụ nke fọrọ nke nta 24% niile internet nrụọrụ weebụ na ụwa. Hanwere usoro ntanetị nwere ike ịntanetị nke mmadụ ọ bụla nwere ike iji ma rite uru - best holidays in south america. Ha plugins, N'onwe Gị saịtị na-ewu ihe na weebụsaịtị ndị ọzọ na ha koodunye ngosiputa oghere maka ọtụtụ ndị ọchụnta ego na ndị na-ede blọgụ iji hazie ebe ịntanetị ha. Otú ọ dị, ndị ọgba ọsọ na-abata na saịtị ndị a n'otun'ụzọ. E nwere ihe karịrị 94563 mbanye anataghị ikike mgbalị ọkụkụ saịtị WordPress kwa minit. Ọnụ ọgụgụ a na-abịa n'ihi ngosipụta ha na-emeghe nke na-ekpugheusoro niile. N'ihi ya, WordPress nwere ike ịmepụta ikpo okwu na-enweghị nchebe nke ọtụtụ ndị omempụ nwere ike iji gbuo ụfọdụ n'ime ọtụtụ ndị dị ize ndụọgụ.
Andrew Dyhan, Onye Nlekọta Ọrụ Ndị Ahịa nke Ọcha ,ewere a anya na Atụmatụ ị chọrọ iji chebe gị WordPress website si hacking ọgụ.
Nchedo okwu mkpanaka
Iji okwuntughe echekwara dị mkpa..Nchọgharị onye nkụzi nke mbụ na-agbalịkarịederede na-adịghị ike tupu ịmalite ọrụ. Okwuntughe dị ka 12345 abụghị paswọọdụ echedoro. N'ọnọdụ ndị ọzọ, anaghị eji nhazipaswọọdụ nke bụ aha nwa gị ma ọ bụ ụlọ ọrụ. Ị nwere ike ịhapụ ọtụtụ ozi ụlọ ọrụ na-adịghị ike, nke a nwere ike ime ka ịntanetị niilenchebe na steeti ala. Ọzọkwa, mee ka ndị ahịa gị mara na ọ dị mkpa ka usoro ndị a dị mkpa.
Nwelite plugins na software spyware
Idebe kọmputa gị ruo ụbọchị nwere ike ịzọpụta gị site na ụfọdụ n'ime mmemme weebụ ọhụrụ ahụ. Naọtụtụ mgbe, ndị na-agba ọsọ na-eji ọrụ njikọ na-emerụ ahụ nke na-eme ihe ederede na ihe nchọgharị weebụ. Dịka ọmụmaatụ, ndị na-agba ọsọ nwere ike iji crossing site scripting. Nke ana-eme ihe nkesa na netwọk site na itinye aka iwu gafee akara mpempe akwụkwọ ma ọ bụ nkwụsị ndị ọzọ maka ntinye ederede. N'ihi ya, ọ dị mkpatụlee ụfọdụ ezoro ezo dị ka data na-aga na site na ihe nkesa na ihe nchọgharị weebụ. Ọzọ ọzọ nwere ike iji anti spy inwere. Ndị a bụsoftware nke nwere ike ịchọpụta nje na malware dị ka Trojans. Mkpokọta weebụ gị nwere ike ịnọ na nchekwa.
Maka usoro ọ bụla eCommerce, enwere ọtụtụ ụzọ nke ịnweta savaỊntanetị na-arụ ọrụ n'ime usoro mgbanwe, ebe onye ọrụ na-eziga ma na-anata iwu sitere na ihe nchọgharị. N'otu aka ahụ, ndị na-agba ọsọ na-eji ohere a meeebe nrụọrụ weebụ ha zitere ma nata iwu inweta ohere na ihe nkesa na-akwadoghị. Mgbe anyị na-eme weebụsaịtị, onye ọrụ na onye ahịa nwere afọ ojujuemekarị mgbaru ọsọ anyị. Anyị anaghị atụle ihe ndị omempụ na ndị ọzọ nwere ike ime. Ụfọdụ n'ime ụzọ kachasị mfe nke onye na-egwu ihenwere ike iji banye n'ime nchekwa data gụnyere SQL ogwu ogbugba. Nchebe nke weebụsaịtị ọ bụla na-adabere na usoro dịnụ nke nwere ike ịkwụsị izu ohi.Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ usoro ndị ọzọ ndị mmadụ na-eji mee ka saịtị ha nwee nchebe megide ndị na-egwu egwu.